ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေ ကြေညက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲ? – Trend.com.mm
ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေ ကြေညက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲ?
Posted on June 28, 2019 June 28, 2019 by Noel
အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအစားအစာတွေက အစာချေဖျက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကိုယ်တစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်အစားအစာက အစာကြေမြန်လဲ၊အစာကြေနှေးလဲ သိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့နေရာမှာလဲ
အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့် ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေကတော့ ချက်ချင်းပဲ အစာအိမ်ထဲကို တန်းပြီးဝင်ရောက်သွားပါတယ်
*အသီးအနှံ ဒါမှမဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်
အသီးအနှံတွေ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်တွေကတော့ အစာချေဖျက်နိုင်ဖို့ မိနစ် ၂၀ နီးပါးအချိန်ယူရပါတယ်။
မုန်လာဥနီ၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ခရမ်းသီး၊စတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဒီတိုင်းစားတဲ့အခါ အစာချေဖျက်နိုင်ဖို့ မိနစ် ၄၀ နီးပါးကြာမြင့်ပါတယ်။
ချက်ပြုတ်ပြီးသား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတော့ စားပြီး မိနစ် ၄၀ ကြာတဲ့အခါ အစာကြေညက်သွားပါတယ်။
ငါးကတော့ အစာချေဖို့ ၄၅ မိနစ်ကနေ မိနစ် ၆၀နီးပါး အချိန်ယူရပါတယ်။
ဆလတ်ရွက်သုပ်ကလည်း အစာချေနိုင်ဖို့ တစ်နာရီကြာမြင့်ပါတယ်။
ပဲ၊ဆန်စတဲ့ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကတော့ အစာကြေနိုင်ဖို့ ၂နာရီကြာမြင့်ပါတယ်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာလည်း ၂ နာရီကြာမြင့်စွာ အချိန်ယူချေဖျက်ရပါတယ်။
အစေ့အဆန်တွေကတော့ အစာချေဖျက်ဖို့ ၃နာရီကြာမြင့်ပါတယ်။
ကြက်သားဟာဆိုရင် တစ်နာရီခွဲ ၂နာရီနီးပါး ကြေညက်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။
အမဲသားကတော့ အစာကြေညက်ဖို့ ၃နာရီအချိန်ယူရပါတယ်
၀က်သားကတော့ ကောင်းကောင်းအစာကြေညက်ဖို့ ၅နာရီတောင်အချိန်ယူရပါတယ်။
တစ်ချို့အစားအစာတွေကတော့ အစာချေဖျက်တာမြန်တယ်။တစ်ချို့ကတော့ နှေးတယ်။အစာချေမြန်တဲ့အစားအစာတွေကိုပဲ အမြဲစားမိနေမယ်ရင် ခဏလေးနဲ့ဗိုက်ပြန်ဆာတတ်ပါတယ်။ဒ့ါအပြင် အဲ့ဒီအစားအစာတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဂလူးကိုစ့်ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့
အစာချေမြန်တဲ့အစားအစာနဲ့အစာချေနှေးတဲ့အစားအစာကို တစ်နပ်တည်းမှာရောနှောမစားဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။စားမယ်ဆိုရင်တောင် အစာချေစနစ်မြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်တဲ့ နေ့လည်ခင်းချိန်မှာ စားသင့်ပါတယ်။မနက်စာနဲ့ညစာကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အားအင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရစေတဲ့အစာချေမြန်တဲ့အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသင့်ပါတယ်။
အစားအသောကျတှနေဲ့ပတျသကျပွီးဘယျလိုအစားအစာတှကေ အစာခဖြေကျြဖို့ အခြိနျဘယျလောကျကွာလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။အဲ့ဒါမှကိုယျတဈခုခုစားတော့မယျဆိုရငျ ဘယျအစားအစာက အစာကွမွေနျလဲ၊အစာကွနှေေးလဲ သိပွီး ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခတြဲ့နရောမှာလဲ
အထောကျအကူဖွဈမှာပါ။ဒါကွောငျ့ ဗဟုသုတအနနေဲ့ သိထားရအောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရကေတော့ ခကျြခငျြးပဲ အစာအိမျထဲကို တနျးပွီးဝငျရောကျသှားပါတယျ
*အသီးအနှံ ဒါမှမဟုတျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျ
အသီးအနှံတှေ၊ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖြျောရညျတှကေတော့ အစာခဖြေကျြနိုငျဖို့ မိနဈ ၂၀ နီးပါးအခြိနျယူရပါတယျ။
မုနျလာဥနီ၊ခရမျးခဉျြသီး၊ခရမျးသီး၊စတဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို ဒီတိုငျးစားတဲ့အခါ အစာခဖြေကျြနိုငျဖို့ မိနဈ ၄၀ နီးပါးကွာမွငျ့ပါတယျ။
ခကျြပွုတျပွီးသား ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေတော့ စားပွီး မိနဈ ၄၀ ကွာတဲ့အခါ အစာကွညေကျသှားပါတယျ။
ငါးကတော့ အစာခဖြေို့ ၄၅ မိနဈကနေ မိနဈ ၆ဝနီးပါး အခြိနျယူရပါတယျ။
ဆလတျရှကျသုပျကလညျး အစာခနြေိုငျဖို့ တဈနာရီကွာမွငျ့ပါတယျ။
ပဲ၊ဆနျစတဲ့ဂြုံနဲ့လုပျထားတဲ့အစားအစာတှကေတော့ အစာကွနေိုငျဖို့ ၂နာရီကွာမွငျ့ပါတယျ။
နို့ထှကျပစ်စညျးတှဟောလညျး ၂ နာရီကွာမွငျ့စှာ အခြိနျယူခဖြေကျြရပါတယျ။
အစအေ့ဆနျတှကေတော့ အစာခဖြေကျြဖို့ ၃နာရီကွာမွငျ့ပါတယျ။
ကွကျသားဟာဆိုရငျ တဈနာရီခှဲ ၂နာရီနီးပါး ကွညေကျဖို့ အခြိနျယူရပါတယျ။
အမဲသားကတော့ အစာကွညေကျဖို့ ၃နာရီအခြိနျယူရပါတယျ
ဝကျသားကတော့ ကောငျးကောငျးအစာကွညေကျဖို့ ၅နာရီတောငျအခြိနျယူရပါတယျ။
တဈခြို့အစားအစာတှကေတော့ အစာခဖြေကျြတာမွနျတယျ။တဈခြို့ကတော့ နှေးတယျ။အစာခမြွေနျတဲ့အစားအစာတှကေိုပဲ အမွဲစားမိနမေယျရငျ ခဏလေးနဲ့ဗိုကျပွနျဆာတတျပါတယျ။ဒ့ါအပွငျ အဲ့ဒီအစားအစာတှဟော ခန်ဓာကိုယျထဲက ဂလူးကိုဈ့ကိုမွငျ့တကျစပေါတယျ။သိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့
အစာခမြွေနျတဲ့အစားအစာနဲ့အစာခနြှေေးတဲ့အစားအစာကို တဈနပျတညျးမှာရောနှောမစားဖို့အကွံပေးထားပါတယျ။စားမယျဆိုရငျတောငျ အစာခစြေနဈမွနျဆနျစှာအလုပျလုပျတဲ့ နလေ့ညျခငျးခြိနျမှာ စားသငျ့ပါတယျ။မနကျစာနဲ့ညစာကတော့ ခန်ဓာကိုယျအားအငျမွနျမွနျဆနျဆနျရစတေဲ့အစာခမြွေနျတဲ့အစားအစာတှကေို ရှေးခယျြစားသငျ့ပါတယျ။
Song-Song စုံတွဲကွာရှင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထင်လွဲမှားခံနေရတဲ့ မင်းသား Park Bo Gum
ပန်းချီဆွဲခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ကို ဒီလိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်…